Wasiirada Xafiiska Adeega Shacabka Iyo Kobcinta Maamulka DDSI Oo Kulan Isbarasho Iyo Dar-dargalinta Shaqooyinka Ah La Yeelatay Maanta Shaqaalaha Xafiiska. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Arbaco.22.Oct.2014, wasiirada xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka DDSI Maajida Maxamed Maxamuud ayaa maanta layeelatay shaqaalaha xafiiska kulan balaadhan oo ku qotoma isbarasho iyo dar dargalinta hawlaha shaqada iyo ilaalinta saacadaha shaqada.
Wasiirada iyo shaqaalaha xafiiska ayaa gorfeeyay waaxaha ay ku kala qoran yihiin shaqaaluhu, isbarasho ka dib ayaa wasiiradu waxay si mug leh uga warantay meelmarinta jihooyinka hayaanka ka midho dhalinta qorshayaasha horumarineed ee u yaala xafiiska iyo xukuumadaba.
Waxaana kamid ahaa hadaladii wasiirada " Runtii waxaa maanta farxad wayn ii ah in aan iskugu nimaadno kulankeenii ugu horeeyay ee aan isku baranayno maadaamo oo aad tihiin cududii iyo hawlwadeenadii shaqaalaha xafiiska dhamaanteena aan nahay xubno lagu aaminay in ay ka midho dhaliyaan shaqada uu xilku ka saran yahay, waxaanan rajaynayaa sidii aad horeba u soo wadeen shaqooyinka ee ay ku jirtay fir fircoonida iyo dadaalka inaad u sii wadaan siina xoojisaan dadaalkiina dhinaca shaqada ah."
Waxayna wasiiradu shaqaalaha si meeqaam sare ah ugu dhiiri galisay in si wayn looga midha dhaliyo qorshayaasha xiliyaysan ee ah rubuclaha oo imika rubicii labaad lagalay. Sidoo kale waxay shaqaalaha
xafiiska kula dar daarantay in ay ilaaliyaan saacadaha shaqada lana dar dar galiyo shaqooyinka.
Dhankooda shaqaalaha xafiiska ayaa si diiran u soo dhaweeyay wasiirada ay xukuumadu u igmatay in ay masuulka noqoto xafiiska waxayna balan qaadeen in ay sii xoojinayaan dadaalkooda ku aadan dhinaca shaqada.